Kaliya maahan dhillooyin, dhillooyin iyo maandooriye -Amsterdam sidoo kale waa magaalada ugu caafimaad badan adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Kaliya maahan dhillooyin, dhillooyin iyo maandooriye -Amsterdam sidoo kale waa magaalada ugu taamsan adduunka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Entertainment • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • LGBTQ • Wararka Nederland • News • Dadka • Waajib ah • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kaliya maahan dhillooyin, dhillooyin iyo maandooriye -Amsterdam sidoo kale waa magaalada ugu taamsan adduunka
Amsterdam ayaa loo caleemo saaray magaalada ugu taamsan adduunka
Kaliya maahan dhillooyinka, dhillooyinka iyo daroogooyinka sharciga ah - Amsterdam sidoo kale waa magaalada ugu taamsan adduunka oo leh tirada ugu badan ee shaqsiyaadka baaskiilka ku shaqeeya, iyo sidoo kale tiro aad u badan oo jecel jimicsiga.
Joogtaynta firfircoonidu had iyo jeer maahan hawl u fudud dadka deggan magaalada.
Sida laga soo xigtay WHO, in ka badan rubuc ka mid ah dadka adduunka ayaan firfircooneyn.
Daraasad cusub oo ay samaysay Reebok ayaa daaha ka rogtay in Amsterdam ay hoy u tahay dadka ugu fiican.
Muhiim u ah caafimaadkeena maskaxeed iyo jirka labadaba, jimicsiga ayaa hadda loo muujiyey inuu yahay qodob muhiim ah oo lagula dagaallamayo COVID-19. Daraasad Mareykan ah oo dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedisay in la'aanta dhaqdhaqaaq jireed ay ka badan karto laba jibaar halista dhimashada coronavirus.
Amsterdam saacadda rush baaskiilka
Si kastaba ha ahaatee, dadka deggan magaalada iyo hab -nololeedkooda fadhiidka ah, joogitaanka firfircoonidu mar walba ma aha hawl fudud. Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) in ka badan rubuc ka mid ah dadka qaangaarka ah ee adduunka ayaan ku filnayn firfircoonida.
Daraasad dhowaan Reebok ayaa lafa guray in ka badan 60 magaalo oo daafaha dunida ah si loo muujiyo magaalooyinka ugu firfircoon adduunka.
Daraasadu waxay ku salaysan tahay baaxad balaadhan oo ah jirdhiska iyo cabbiraadaha ku wajahan caafimaadka sida heerka dhaqdhaqaaqa jirka oo aan ku filnayn, boqolleyda xubnaha jimicsiga, boqolkiiba isticmaalka baaskiilka iyo cabbirrada deegaanka ee dheeraadka ah.
Caalamka, 28% dadka waaweyn ee da'doodu tahay 18 iyo ka weyn waxay ahaayeen kuwo aan si firfircoon u firfircoonayn 2016. Marka la eego qeexitaanka WHO tani waxay ka dhigan tahay inaysan ku dhaqmin "ugu yaraan 150 daqiiqo oo dhexdhexaad-dhexdhexaad ah, ama 75 daqiiqo dhaqdhaqaaq jireed oo xoog leh toddobaadkii".
Wadammada dakhligoodu sarreeyo ayaa si gaar ah u saameeya isbeddelkan sababtuna tahay baaxadda shaqooyinka miiska, laakiin jimicsiga micnaheedu ma aha in waqti badan lagu qaato jimicsiga.
Si kastaba ha ahaatee, magaalooyinka qaarkood waxay ka faa'iidaystaan ​​jawi ku habboon jirdhiska marka loo eego kuwa kale, iyadoo ay ugu wacan tahay tayada hawo wanaagsan, tiro badan oo ah meelaha cagaaran iyo jimicsiyada la awoodi karo.
Eeg liiska 20 -ka magaalo ee ugu taamsan xagga hoose:
Chaa Wadamada Heerka cayilka (heerka dalka) Qiimaha xubinnimada jimicsiga bil kasta Dadka baaskiilka u kaxeeya si ay u shaqeeyaan Heerka dhaqdhaqaaqa jirka oo aan ku filnayn (dalka) Boqolleyda meelaha cagaaran ee dadweynaha % dadka dalka ee taga jimicsiga
8 Stockholm Iswidhan 20.60% € 47.68 12.20% 23.1 40.00% 22.00%
Paul ee NY wuxuu leeyahay,
September 20, 2021 at 04: 17
No War on Drugs and no war for Israel hubaal waxay caawisaa caafimaadka maaliyadeed iyo maskaxeed ee dalka.